Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Inomụaka Angelino Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Agbanwe
Ihe omuma anyi nke Angelino na-egosiputa ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ezinulo ya, ndi nne na nna, enyi nwanyi / nwunye ka ibu, Childmụaka, Lzọ ndụ, Ndụ Nke Onwe na Wortọ Net.
N'okwu dị mfe, anyị na-ewetara gị njem ndị na - agba ọsọ na Spanish. Lifebogger malitere site na nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama na RB Leipzig. Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ onwe gị sie ike, lee oge ọ bụ nwata rue ụlọ okenye - nchịkọta zuru oke nke Angelino's Bio.
ekele Julian Nagelsmann, dị ike ọrụ - Angelino abụrụla kemgbe 2020 bụrụ ihe dị mkpa dị ka otu n'ime aka ekpe na-akpali akpali na Europe.
Agbanyeghị, anyị chọpụtara na ọ bụ mmadụ ole na ole maara akụkọ ndụ Spaniard nke ọma. Anyị nwere ya, ha niile akwadoro gị. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Maka ndị na-ebido Biography, ndị ịgba bọọlụ na-ebu aha zuru oke; Jose Angel Esmoris Tasende. Dika ozo, Angelino bu nani aha otutu.
A mụrụ ya na ụbọchị 4 nke Jenụwarị 1997 na nne ya, Soneira Tasende Anon, na nna a na-amaghị ama, na mpaghara Coristanco, northwest Spain.
Obere aka ekpe dị obere bụ ọkpara nke ụmụ abụọ amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya. Nsonaazụ sitere na nyocha emere na ọ bụ otu nne zụlitere Angelino nke yiri ka ọ dị afọ iri anọ.
Site na ihe anyị maara, Soneira Tasende Anon mara mma ma Angelino weere mgbe ọ yitụrụ.
Zute Soneira Tasende Anon. Ọ bụ mama mara mma nke Angelino.
Nka na ụzụ Dribbler nwere nwanne nwoke nke aha ya bụ Dani Tasende. Laa azụ n'oge ochie, Angelo bụ nwata nwere obi ụtọ nke na-anaghị echebara nchegbu nke ndụ echiche.
Kama nke ahụ, ọ nwere ịhụnanya miri emi maka football ma nwee obi ụtọ iso nwanne ya nwoke, Dani Tasende nọrọ. Ha na-adị mma n'oge ha bụ nwata, nri?
N'ụbọchị ndị ahụ na agbata obi ha Coristanco, Angelino na Dani ga-etolite otu ndị otu egwu siri ike. Ha niile meriri ndị ọgbọ ha. Brothersmụnna nwoke abụọ ahụ nwere udo na ijikwa bọl ahụ, ihe omume nke mechara bụrụ akara aka.
Ezigbo ezinụlọ nke Angelino:
Site na mmalite, Soneira Tasende Anon mere ka ụmụ ya nwoke abụọ ghara ịgụ agụụ ma ọ bụ ghara ilekwasị anya. Ọ bụ nwanyị na-arụsi ọrụ ike ma nwee ezi agụmakwụkwọ banyere ego. Eziokwu ahụ emeghị ka ezinụlọ ya sie ike.
N'ihi ya, na-arụ ọrụ n'etiti ụlọ klas hụrụ Soneira ka ọ debanye aha Angelino na Dani na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ dị ọnụ ala. Ihe ndị a mepụtara ezigbo ego n'ihe gbasara ego na mmefu.
Maka ndị na-ebido ebido, ọgụgụ isi Spanish si na mpaghara A Coruna na Galicia, Spain. Obodo nke Angelino gbara Oké Osimiri Atlantic gburugburu n’ebe ugwu na ọdịda anyanwụ.
Dị ka e gosiri na map ahụ, ezinụlọ ya so na ya Nde mmadụ 2.4 na-asụ asụsụ Galician.
Ọ bụrụ na ịmaghị, ebe ezinụlọ Angelino si bịa bụ ụlọ nke Playa de Riazor. Nke a bụ otu n'ime obodo kachasị mma na Europe.
Osimiri mara mma na-enweta ụgbọ mmiri 62 kwa afọ. Ruo taa, Playa de Riazor nwere ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, hammocks, ụlọ ọrụ egwuregwu, wdg.
Akụkọ Angelino Football:
Onye na-ahụ maka bọọlụ ahụ na-atọ ụtọ malitere njem ya dị ka onye agbata obi ya, Pedri Gonzalez. Mgbe Angelino mere ememme ncheta afọ nke anọ ya, ndị mụrụ ya chere echiche banyere ụzọ kachasị mma iji mee ka ọ sonye na agụmakwụkwọ.
N'ihi ya, ha debara aha ya na Luis Calvo Sanz, nke dị ọnụ ala. N'ebe ahụ, ọ nọrọ oge ọ bụ nwata na-amụta ụzọ esi agba bọọlụ.
Na mgbe niile, nne Angelino ga-agbada mgbe ọ gụsịrị ọrụ iji kpọpụta ya na agụmakwụkwọ mgbe ọ bụla nkuzi ya kwụsịrị.
Ruo afọ isii, kpakpando n'ọdịnihu ga-aga n'ihu na-ahụ otu usoro ahụ nke mere ka ọ na-agbago n'ọkwá ahụ.
Dika Angelino mere agadi, otua ka nne ya (Soneira Tasende Anon) si tulee mkpa o di idebanye aha ya na ulo akwukwo kariri nke oma. N'egbughị oge, ọ zigara ya Deportivo La Coruna mgbe ụbọchị ọmụmụ ya nke iri na 10 na 2007.
N'ezie, ọ dịghịrị ya mfe ịmata ọrụ ya na nku ya. Otú ọ dị, ọganihu Angelino na ọganihu ya na nkà na agility bịara nwayọọ nwayọọ na ụbọchị ọ bụla na-agafe.
Ọzọkwa, ọnụnọ nke ndị ọzọ na-eto eto na nkà mmụta sayensị ọhụrụ ya mere ka ịnụ ọkụ n'obi ya maka ihe ịga nke ọma too nke ukwuu.
Ihe ndekọ Angelino - Roadzọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Mgbe oge ruru, kpakpando a puru iche weputara aka n'egwuregwu football. Nke a nwetara ọtụtụ klọb na-arịọ maka ọrụ ya. Mgbe ya na ndị mụrụ ya kwurịtara okwu, Manchester City kwụsịrị ịbanye na nwata ahụ na 2012.
N'ụzọ dị mwute, Angelino apụtaghị maka ndị otu EPL tupu eziga ya ọtụtụ mgbazinye ego. Na mbu, o sonyeere New York City n'akụkụ Frank Lampard. Emechaa, ọ kwagara Girona maka obere oge.
Nkwupụta ego ya gara n'ihu ka ọ gosipụtara obere oge maka Mallorca na NAC Breda. N'ebe ahụ, ọ malitere inwe obi ụtọ na ụwa bọl.
Na June 2018, nwa nwoke ahụ maka ọdịnihu bịanyere aka na PSV Eindhoven nkwekọrịta afọ ise. N’afọ mbụ ya, ọ ghọrọ onyinye nke oge.
Ihe ndekọ Angelino - Akụkọ Successga nke Ọma:
Ya na nchebe ya, Pep Guardiola chere na ọ dị mkpa ịkpọghachite Spaniard na ndị otu ya. N'ihi ya, ọ bịanyere aka ọzọ Angelino na Man City na 2019.
Featuring na-amasị nke Eric Garcia mere ka aha ya bụrụ onye a ma ama n'etiti ndị hụrụ egwuregwu bọọlụ bekee n'anya.
Lere anya dị ka njupụta maka akụkụ ya, Pep Guardiola kpebiri ịgbazinye Angelino na RB Leipzig. Site na ndu nke Julian Nagelsmann, ọ ghọrọ onye pụrụ iche na pitch - ọbụlagodi karịa ihe Pep tụrụ anya ya.
Ka m na-ede Bio a, Leipzig nwere iwu ịzụta Galician Jewel n'ihi na ha rọrọ nrọ na ọ ga-anọgide na-anọ niile maka ekele ahụ.
Ọ bụrụ na ị ka na-eche ihe kpatara ụwa bọọlụ ji kpọọ ya onye na-agbachitere agbachitere 2020, lee vidiyo vidiyo dị n'okpuru. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Nwanyị Angelino na nwunye ka ha bụrụ:
E jiri ya tụnyere onye otu ya Dani Olmo, aka ekpe-azụ agawo n'ihu n'ịzụlite mmekọrịta mmekọrịta kwesịrị ekwesị.
Kemgbe ọ malitere ịbụ onye a ma ama, Angelino na-akpa enyi ya nwanyị, Rocio Galinda. Ọ bụ nwanyị mara mma nke na-enwe obi ụtọ na ịse foto na nwoke na-ele ya anya dị ka nwunye na nne nke ụmụ ya n'ọdịnihu.
Rocio Galinda obi ụtọ. Ọ hụrụ nwoke ya n'anya nke ukwuu.
Kedu ihe ọzọ?… Angelino na-arụ ọrụ iji kee eriri ya na nwunye ya n'oge na-adịghị anya. Ọbụghị naanị na ọ nwere obi ụtọ na enyi nwanyị ya, nne ya na nwanne ya nwoke enyekwala ndị di na nwunye nkwado otu narị.
Ekwela ekworo ma ọ bụrụ na m gwa gị na Angelino na FIFA na nwunye ya chọrọ ịlụ.
Rocio Galinda na di ya na-egwu FIFA. Nke ahụ abụghị mma?
Ọ bụ ezie na ọ kabeghị nwunye ya (Rocio), di na nwunye ahụ amụọla nwa nwoke mara mma. N'ezie, ndụ mara mma ugbu a maka onye na-agbachitere ya ka ọ bụrụ nna na onye na-elekọta ezinụlọ ya.
Ihe omuma nke Angelino - Ileba anya na ndu nke onwe ya:
Gịnị na-eme obere mmụọ ọjọọ ahụ si Leipzig Ihe puru iche nke na-emenye egwu ndi na-agbachitere ya ma ndi agha?
Iji malite, onye ya bụ ngwakọta nke àgwà zodiac Capricorn. Site na horoscope ya, Angelino enweela ọchị.
N'ihu ike gwụrụ, ọ na-abịa napụta ndị otu ya site na ịtọlite ​​ikuku nke ọupụ.
N'eziokwu na-ekwu okwu, ọ dịghị dull oge na ya. Angelino anaghị ekwe ka nnukwu ụgwọ ọnwa ya rapara ya n'omume mpako.
Obi abụọ adịghị ya, ụgwọ ọnwa ya kwa afọ nke million 2.5 (2020 Stats) nwere ike inye ya ụdị ndụ okomoko dị ka Javi Martinez.
Agbanyeghị, Angelino họọrọ ibi ndụ dị ala. Anyị na-eche na nzụlite Soneira bụ otu n'ime isi ihe kpatara emetụtala etu o si emefu ego.
Ọ bụghị onye ọkpụkpọ ọ bụla na-abịanụ nwere ihe ùgwù inwe Net Net nke € 7 Nde na 23. Ma anyị ekpe-ekpe mere ya.
Ka m na-ede Bio a, Angelino dị nso na inweta nnukwu ego. Nke a buru ibu ma gafee nrọ nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị Spanish.
Ndụ ezinụlọ Angelino:
N'otu oge, njem nke stardom siri ike. Mgbe ọ na-ewute Spaniard na enweghị ohere na Man City, ezinụlọ ya dum na-achọ ya.
Angelino anaghị ada mbà n'ihi na ndị mụrụ ya, nne na nna ya ochie, enyi ya nwaanyị na nwanne ya nwoke kwụ ya n'azụ. N'ihi ya, anyị na-ewetara gị ozi doro anya banyere onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ ya.
Gaa na ndị mmadụ bọọlụ bọọlụ kpọrọ ezinụlọ ya.
Banyere nne Angelino:
Soneira Tasende Anon bụ mama dị mpako nke ndị ịgba ọsọ. Dị ka nne nanị ya na-azụ ụmụ, ọ na-arụsi ọrụ ike iji zụlite ụmụ ya nwoke abụọ.
Mama Angelino bụ ụdị na-eme ka ụmụ ya nwoke bụ José Ángel na Dani bụrụ ndị nwe ụlọ dịka onwe ya. Ruo ugbu a, Angelino na-akwụ ya ụgwọ maka ịbụ onye ndụmọdụ kachasị mma na onye ndụmọdụ ọ bụla nwere.
José Ángel AKA Angelino nwere oge na Soneira, mama ya.
Banyere Nna Angelino:
Ebe Spain nwere ọnụ ọgụgụ ịgba alụkwaghịm nke abụọ (60%) n'ụwa, anyị chere na nna Angelino mebiri nne ya n'isi ụtụtụ. Ikekwe ọ bụ ya mere onye ọrụ ntanetị ji arụkarị ọrụ dị ukwuu banyere nna ya n'oge ọ bụla na Bio.
Banyere Nwanna Angelino:
Dani Tasende bụ naanị nwanne nwanne aka ekpe. Ọ bụrụ na ị maghị, ọ bụkwa onye ọkpụkpọ ọkachamara nwere àgwà dị jụụ.
Dani Tasende ji nwanne ya nwoke ụgwọ maka ijikọ nwata na ịhụnanya na nlekọta dị ukwuu. Ka m na-ede Bio a, ọ pụtalarị maka Villarreal CF kemgbe 2016.
Dani Tasende na nwanne ya nwoke wee see foto - Angelino.
Banyere ndị ikwu Angelino:
Anyị enweghị ike ịhapụ nne na nna ya ochie na foto nke ndụ ezinụlọ ya nwere obi ụtọ. Na oge ezumike ya, Angelino na nne nne ya na nna nna ya na-anọkọ. N'ezie, ndị nne na nna ya, ndị ikwu ya na ndị ikwu ya nwere obi ụtọ maka ọganiihu ya.
Iji mechie Akụkọ Ndụ ya, lee ụfọdụ eziokwu banyere ya. Ihe ndị a ga - enyere gị aka inweta ihe ọmụma zuru oke banyere Biography.
Eziokwu # 1: Salary breakage and earnings per second:
Kwa Afọ € 2,500,000
kwa ọnwa € 208,333
Kwa Izu € 48,003
Kwa .bọchị € 6,858
Kwa elekere € 286
Kwa Nkeji € 4.8
Kwa nke abụọ € 0.08
Nnyocha na-egosi na otu nwa amaala Spanish ga-arụ ọrụ maka afọ 6 iji rite ihe onye Spen na-enweta n'otu ọnwa.
Ebe ọ bụ na ị malitere ile Angelino'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Eziokwu # 2: Angelino's Tattoos:
Angelino weere ahụ ya dị ka akwụkwọ akụkọ ya, ebe egbugbu ya na-akọ akụkọ ya. Dị ka Alvaro Morata, ọ hụrụ n'anya ink ọtụtụ ihe ncheta na ahụ ya. N'ezie, a ga-ahụ tattoo ya dị jụụ mgbe niile, ọbụlagodi mgbe ọ na-eyi uwe iji mee ihe dị mkpa na pitch.
Angelino bụ onye hụrụ egbugbu n'anya.
Eziokwu # 3: Okpukpe Angelino:
Mgbe a bịara n'okwukwe Ndị Kraịst ya, Angelino anaghị achọ mgbe niile ka ọ ghara ịdaba na nkwenkwe ya. Ọ bụ onye Katọlik ma gosipụtawo ezigbo ịhụnanya ya n'ebe Jizọs nọ ọtụtụ oge ka ọ na-agba Krismas na enyi nwanyị ọ hụrụ n'anya.
Na-e gosiri na a yiri larịị dị ka Ferran Torres na-egosi na Angelino egosila onwe ya dị ka ihe ngosi ọhụụ nke ụwa. Ya 2020 FIFA Stats na-egosi na enwere ike karịa ihe anyị hụrụ n'ime ya n'oge a.
Site na Angelino's Life Akụkọ, anyị nwere ike ịgba akaebe na ọ kwụsịbeghị ọrụ ya, ọbụlagodi mgbe ọ nwere obere egwuregwu.
Dị ka a tụrụ anya ya, afọ ya agaghị akwụsị inyefe ya n'ìhè nke ama ama ọ chọrọ n'oge niile. Ka a sịkwa ihe mere ọtụtụ ndị nyocha ji eche ma ọ bụrụ Angelino bụ azịza nsogbu ahụhụ n'aka ekpe nke Man City.
N'eziokwu, ihe niile ọ rụzuru agaraghị ekwe omume ma ọ bụrụ na ọ bụghị nkwado nke otu onye otu ezinụlọ- Soneira Tasende Anon (nne ya).
Ná mmalite, ọ hụrụ na José Ángel na nwanne ya nwoke Dani nwere ụdị nrọ ahụ. Ọ bụzị ihe mmeghe nke mere ka mkpebi ha maka ihe ịga nke ọma kwalite.
Daalụ maka ịgụ akwụkwọ nwata na akụkọ ndụ nke Angelino. Nọrọ na anyị na akụkọ yiri nke ndị ọzọ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish.
Jiri obiọma gwa anyị ma ọ bụrụ na ịchọta ihe ọ bụla nke na-adịghị ka ọ dị mma na ncheta a. Maka ndị na-agụ akwụkwọ ngwa ngwa, lee nchịkọta nke Ndụ Angelino Life Akụkọ nke anyị tebụl wiki.
Aha n'uju: Jose Angel Esmoris Tasende
aha otutu: Angelino
Age: 24 afọ na ọnwa 8.
Ebe amụrụ onye: Obodo Coristanco, Spain
Nne: Soneira Tasende Anon
Ụmụnne: Dani Tasende (nwanne)
Enyi / Nwunye: Rocio Galinda
Ezigbo Net: 7 Nde (2020 Ọnọdụ)
Rygwọ ọnwa kwa afọ: Million 2.5 million (2020 Ọnọdụ)
elu: 1.70 m (5 ft 7 na)